လင်းလင်း ဆိုသော မန်းလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Music » လင်းလင်း ဆိုသော မန်းလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း
လင်းလင်း ဆိုသော မန်းလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း
Posted by Sonny on Jun 4, 2012 in Music | 36 comments
လင်းလင်း ဆိုသော မန်းလေးမြို့သေဆုံးခြင်း…ညီငယ်လင်းလင်းအားလေးစားလျက်
စာသားများကို နားထောင်ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည်။အဆိုတော် ညီငယ် လင်းလင်း မန္တလေးအား ဂုဏ် ပြုပါ၏။
အဆိုတော် ညီငယ် လင်းလင်း မန္တလေးအား ဂုဏ် ပြုပါ၏။
အန်တီဆန်နီ အဲဒီသီချင်းက ဘယ်ထဲမှာပါတာလဲချင့်
အန်တီဆန်နီလည်း သူများ ယူကျုဘစ် you tube က ဒေါင်းလုပ် ပြီးပေးလို့ရတာပါကွယ်
သီချင်းကိုတော့ နားထောင်ပြီး ချရေးတာပါ…
ဖေ့ဘုတ်မှာ ကြားခဲ့ရပေမယ့် ၊ စာသားကို အခုမှ သိရတယ်ဗျာ
ဓါတ်ပုံနဲ့ တစ်ကွ ဖော်ပြပေးလို့ ရှဲရှဲပါ ကိုကိုဆန်
ကိုယ်မှာလည်း မျက်စေ့မှေးမှေး သူငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်
အားလုံး ကို ဆိုလိုမယ် မထင်ပါဘူး
အကြင်နာ ခေါင်းပါးတဲ့ တစ်ချို့ကိုပဲဆိုလိုတာနေမှာပါ။
ကိုဆန်နီရေ .. ကိုယ်ထင်ပြလို့ မြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ဟီး
အဆိုတော် လင်းလင်းရဲ့ စားသားတွေမိုက်တယ် … သီချင်းဆိုတာလည်း မာန်ပါတယ် … ။ စာကျက်ပြီး ဆိုသလိုမျိုးမဟုတ်ပဲ .. ရင်ထဲက လာတဲ့ အသံနဲ့ ဟန်ပန်က … မြင်ရ ကြားရသူအဖို့ … သူ့သီချင်းထဲ စီးမျောသွားမိသလို ဖြစ်မိတယ် … ။
နက်ကော်နက်ရှင်ကောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ ဒေါင်း ကြည့်ပါလား
အန်တီဆန်နီ ……… (ဖရဲခေါ်လို့လိုက်ခေါ်မိပါသည်)လင်းလင်းဆိုတာ သီချင်းဆိုတဲ့ အဆိုတော်လားဟင် မန်းလေးမြို့ကလမ်းတွေပေါ်မှာဆိုနေတာလေ …… အဲဒီ အဆိုတော်သာဆိုရင် သူ့သီချင်းတွေကို ကြိုက်တယ် ……. သီးချင်းတွေကို အခါခါနားထောင်ဖူးပေးမယ့် လူကိုတော့ ဟိုနေ့ညက တစ်ခါပဲခွေကြည့်ဖူးတယ် မန်းလေးမြို့ကလမ်းမပေါ်မှာ သီချင်းဆိုနေတာလေ ……
ဒီတစ်ခါ မန်းလေးလာရင် အံတီဆန်နီနဲ့လာတွေ့ပါဦးမယ်
တွေဆုံရတာ ၀မ်းသာပါတယ် နော်..
မန်းလေးမြို့သေဆုံးခြင်း ” အဒီစာသာလေးတွေကြိုက်တယ်ဗျာ
အင်း.ငဆန်နီ သူငယ်ချင်းတွေလည်း တပည့်တွေလည်းအဖြူရောင်အသားနဲ့ပါ ဒါမေမဲ့ကြင်နာတရားရှိပါတယ်။
မျက်လုံးမှေးမှေးလည်းရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ အကြင်နာအကြည့်နဲ့ပါ။
လင်းလင်း အားလုံးကို ဆိုလိုရှာမယ်မထင်ပါဘူး။
အိတုန်ရော ဘယ်နားက စာသား heart ထိလည်းခင်ဗျာပြောပေးပါ။
ကမ္ဘာမကြေသီချင်း ကတော့ ငယ်ငယ်က နေ့တိုင်း assembly တက်တိုင်း ဆို ခဲ့ရတယ်လေ အခု
ဆိုတဲ့ နေရာလေးက .. ဟက်ထိပါတယ် ကိုဆန်နီရေ … အဖြူတွေများပေမယ့် တချို့သော အဖြူများက … ကိုယ်ချင်းစာနားလည်မှုရှိပြီး … တစ်ချို့ကတော့ ဘနှဖူး သိုက်တူးဖို့ ကြံကြတဲ့ လူတွေပါ … ။
အူးအူးဗိုက်ရေ ……. နွဲ့နေတာ အူးဗိုက်ပုံနဲ့မသင့်တော်ဘူးနော် …… အရက်သမားအခြောက်ကြီး အရွယ်ကြီးတဲ့အအိုခြောက်ပုံနဲ့တူနေတယ် ……
ဒါပုံထဲမှာ ကိုဆန်နီကြီး ညက်လုံးမှေးနေတယ်။
မျက်လုံးမှေးတာ အဲဒါ မန်းသင်္ကြန်မှာလေ..ကဲနေတာပေါ့…
အမလေး သေတယ်ကြားလို့ လန့်လန့်နဲ့ ဝင်ဖတ်မိတယ်
ဝှုး . တော်ပါသေးရဲ့ . ဘယ်သူမှ မသေပေလို့ ။
မန္တလေးမြို့ သေဆုံးအောင်သတ်တာ ဖြူမှေးတို့မဟုတ်ဘူး။
တံခါးဖွင့် ပေးတဲ့ ကိုယ့်လူတွေ၊ လုပ်ခွင့်တွေပေးတဲ့ ကိုယ့်လူတွေကြောင့်
ဆရာလေးဆန်နီရေ.. လင်းလင်းနဲ့ တွဲတွေ့ရတော့လည်း
သဘာဝကျတဲ့ ကျနော်နေထိုင်တဲ့ life နဲ့လည်း
၀ိုင်းလေးထောင်ပြီး ဟဲမလားလို့… ဟီးး
အင်း ပြောရရင်တော့ ဗမာတွေ ၀ဋ် လိုက်တယ် လို့ ဆိုမလား ဘဲ.အ ရင်တုန်း က မေမြို့ မိုး ကို ဆရာစိုင်း ခမ်းလိတ်ရေး ပြီး စိုင်ထီး ဆိုင်ဆို ခဲ့ ရသလို ပေါ့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး လက်လျှော့ လိုက်ရပြီ ဆိုသလိုမျိုး ပေါ့.တကယ်ဆိုရင် မေမြို့ တို့ မိုး ကုတ်တို့ ဆိုတာ ရှမ်း ပြည်ပါ. မပြော မဆိုနဲ့ ဗမာ အ စိုး ရ က မန်း လေး တိုင်း ထဲ ကိုဆွဲထည့် ထား တာ ပါ. မပြေး သော် လည်း ကန်ရာရှိဆိုသလို တကယ် လို့ များ ရှမ်း ပြည် နယ်ကြီး ပြည်မက နေခွဲထွက်ခဲ့ မယ် ဆို ရင် မပါသွား အောင်ပေါ့. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်မှာတော့ ဘ၀တူတွေ ဖြစ်နေတော့ သွေး စည်း ဖို့ တော့ လို လာ ပြီ။
၀ဋ် လိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ရင် တောသေးတယ်
မှတ်ချက်…မျက်လုံးမှေးမှေး အကြည့်နဲ့လူများ အားလုံးကို အပြစ်မပြောလိုပါ
လေးလေးစားစား နဲ့ ဖတ်ပြီး
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပိုလေးစားသွားတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း..။
ဖြစ်နိုင်ရင် သီချင်းလေးကိုပါ နားထောင်ချင်ပါတယ်ဗျာ။
သူများတွေနားထောင်နေတော့ အားကျပြီး ပြန်လာမန့်တာပါ
download link လေးများ တွေ့ရင်ပြောပါအုန်းနော်
ဒါနဲ့ ဖုန်းက မြန်မာဖောင့်ပေါ်ပြီလား
ဒါနဲ့ လင်းလင်းက ကိုဆန်နီထက် ခေါင်းတလုံးသာနေပါလား ။
ကိုဆန်နီနေရာမှာ အန်တီပုဆို ခေါင်း၂လုံးလောက် သာမယ်ထင်တယ်
ကောလဟာလတွေကို မယုံပါနဲ့ ဟယ်။ နောက်တခါ တီချယ့်အိမ်လာဖြစ်ရင် အန်တီပု လာခဲ့ပါ့မယ်။
အဲခါကျရင် ၆ လက်မ ဒေါက်စီးလာမလို့လား အန်တီပုချင့်
ဟဲ့ဟဲ့ ပုမှနုတယ်ဆိုတာ သိဘူးလား
“သူစိမ်းတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ငါတို့ရဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ သေဆုံးခြင်း” ထင်တယ်နော်
“ဆုံတွေ့နေတဲ့” မဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ ကျွန်တော်နားနဲ့ ကြားတာတော့လေ